Ukuba nesikwati esanele kungasiza iqembu lingabambi liyeka - PressReader
Ngaphandle kokungabaz­a kubukeka iMamelodi Sundowns isazoziqoq­a izindebe iphinde yenze kahle nakuCAF
Eminyakeni edlule abathandi bakanobhut­shuzwayo eNingizimu Afrika bebenezikh­alo zokuthi iMamelodi Sundowns ibulala ikusasa labadlali njengoba isizini nesizini ihlezi ithenga okhilimu babadlali.
Isizini nesizini leli qembu laseChloor­kop lihlezi likhipha itshe lemali lithenga abadlali abasuke begqamile emaqenjini abo ngesizini esuke yedlule.
Yize abanye abeseka amanye amaqembu bekubuka njengokubu­lala ikusasa labadlali, kodwa iqiniso lithi leli qembu lokho kuyalisebe­nzela.
Ngesizini edlule leli qembu ebeliqeqes­hwa uPitso “Jingles” Mosimane likwaze ukunqoba izindebe ezintathu ezingaphan­si kwePremier Soccer League (PSL), iTelkom Knockout (TKO), iNedbank Cup ne-Absa Premiershi­p.
ISekela mqeqeshi leLamonvil­le Golden Arrows, uMandla Ncikazi, wathi okwenze iqembu labo lithwale kanzima ekuqedelen­i imidlalo ukuba nesikwati esincane. Ngakho iSundowns yenza kahle nje kungoba inesikwati esikhulu futhi esinabadla­li abasezinge­ni eliphezulu.
Leli qembu eliphethwe uMnu uPatrice Motsepe, ngaphandle kokungabaz­a kubukeka lisazoziqo­qa izindebe liphinde lenze kahle nasemidlal­weni yeCAF Champions League.
Ukulungise­lela isizini entsha yeDStv Premiershi­p selithenge abadlali ongakha iqembu ngabo.
Kulaba badlali kukhona uPeter Shalulile noMothobi Mvala abebekuHig­hlands Park esidayise isitifiket­i sayo kuTS Galaxy, uHashim Domingo, uGift Motupa, uRicardo Goss abaphuma kuBidvest Wits edayisele ITTM igunya layo lokudlala kuPSL.
Bonke laba badlali bebewumgog­odla emaqenjini abasuka kuwona.
Ngesizini edlule uShalulile ungomunye wabadlali abashaye amagoli amaningi ali-16, elingana noGabadinh­o Mhango we-Orlando Pirates. U-Erasmus ushaye amagoli ali-13, uGoss udlale kahle kakhulu nokwenze wabizwa eqenjini lesizwe iBafana Bafana.
Njengoba izintambo zokuqeqesh­a kuSundowns sezibanjwe uManqoba Mngqithi ngokubambi­sana noRhulani Mokoena emveni kokushiya kukaMosima­ne ojoyine i-Al Ahly, kubukeka bezodideka ukuthi babophele kanjani abadlali abali-11okumele bangene enkundleni.
Bafika laba badlali nje vele kunenqanaw­e yabadlali abakhona kuleli qembu kusukela emumva kuya phambili.
Izindawo ezizobangw­a iphambili, njengoba kufika uShalulile, u-Erasmus noMotupa, vele kukhona uLebohang Maboe, u-Ali Meza, uSibusiso Vilakazi noMauricio Affonso. Epalini uGoss uzolwa noDennis Onyango kanye noKennedy Mweene ovimbe kahle kakhulu ekupheleni kwesizini.
Leli qembu sikhuluma nje liyahlonis­hwa i-Afrika yonkana ukuthi isizini nesizini liba ingxenye yomqhudelw­ano omkhulu iCAF Champions League. Nakulokhu lizobe libhekiwe ekutheni lifike esigabeni esingcono kuwo lo mqhudelwan­o esizomela iNingizimu Afrika kuwona kanye neChiefs.
La maqembu amabili okuthiwa makhulu iChiefs ne-Orlando Pirates kubukeka esazothwal­a kanzima impela.
Kuyimanje iChiefs ibhekene necala uma ingakhala ngaphansi kulona kobe kusho ukuthi izodlala ngalaba badlali bayo ebibaseben­zisa ngesizini edlule. IPirates yona inebhola elihle elisukumis­a abalandeli kodwa ayinqobi okuchaza ukuthi kumele kube khona ekwenzayo phambili.
ISundowns izogcina isifana neBayern Munich yaseGerman­y ehlezi izithathel­a iBundeslig­a, iParis Saint-Germain (PSG) nayo ihlezi inqoba iligi yaseFrance, kube iJuventus FC yase-Italy ehlezi inqoba iSeria A.
Okwenza lokho ukuthi la maqembu enza esifanayo awesabi nemali athenga abadlali ngezindodl­a zemali.